Viewfinder - ysmụ nwoke Lovehụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ihe nlere nkezi 4.5 / 5 si 21
NA / A, o nwere ihe nlere 53.1K
Site na nwata, ihe ndi mara nma na aru ndi Haemin aru. N'oge ahụ, ọ bụ ihe eji egwuri egwu ọhụrụ ma ọ bụ aka nwata klas ya. Ugbu a, ọ bụ ihu mma nke sunbae ya. Ugbu a ọ nọ na kọleji, anya ya na-adọrọ mmasị na Youngwon: onye kachasị ewu ewu na nke mara mma n'ụlọ akwụkwọ. Jọ na-atụ egwu ịbịakwute ya, ọ na-ese Youngwon site n'ebe dị anya, foto ọ na-ewere iji zie echiche efu ya. Ma mgbe Youngwon chọpụtara, a na-amanye Haemin iche ihe ọ chọrọ ihu. Tupu ya amara ihe na ya, echiche nzuzo ndị ahụ na-amalite ịghọ ezigbo ezigbo ...
Isi nke 89 Ọgwụgwụ April 10, 2021
Isi nke 44 March 31, 2021
Isi nke 43 Ọgwụgwụ ss2 March 31, 2021
Chapter 42 March 31, 2021
Chapter 41 March 31, 2021
Chapter 40 March 31, 2021
Chapter 39 March 31, 2021
Chapter 38 March 31, 2021
Chapter 37 March 31, 2021
Chapter 36 March 31, 2021
Chapter 35 March 31, 2021
Chapter 34 March 31, 2021
Chapter 33 March 31, 2021
Isi nke 25 nkwụsị ss1 March 19, 2021